शनिबार, यी राशिका लागि छ फलीफाप, तपाईको राशि कुन ? – Naya Pusta
शनिबार, यी राशिका लागि छ फलीफाप, तपाईको राशि कुन ?
✍️ नयाँ पुस्ता प्रकाशित मिति : २०७६ मंसिर २८, शनिबार ०७:४८ [post-views]
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) भौतिक वस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाइने तथा आकस्मिक धन सम्पति प्राप्तहुने हुदा सुख सागरमा रमाउने समय रहेकोछ । शिक्षामा सुधार भई बिगतका कमजोरिलाई सच्याउदै चाहेको गन्तव्य पहिल्याउन सहज हुनेछ । छुट्टिएका माया प्रेमहरु पुनह जोडिने अधिक सम्भावना रहेकोछ भने नयाँ प्रेम प्रस्ताव आउनेछ । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धि पेशा व्यावसायबाट मनग्गे धन कमाउन सकिनेछ । आफन्त तथा सन्तानले प्रगति गरि तपार्ईँलाई सम्झनेछन्।
चोखो मनले लाइक र शेयर गरी हेर्नुहोस् राशि अनुसार तपाईंको भाग्य
धनुषामा बम विस्फोट: २ को मृत्यु, प्रहरी निरिक्षकसहित ६ जना गम्भीर